Mienzaniso yeYakatenderwa Yekupinda Tsamba Tsamba dzeRuregerero - Kuenda Kune Dzimwe Nyika
itunes wont connect to iphone
apuro tarisa bhatiri hupenyu hupenyu akateedzana 3
foni haina kukwanisa kubatanidza kune wifi
Mienzaniso yetsamba dzeRuregerero rwekupinda - Kutenderwa - 2021
Semuenzaniso tsamba yekutambura (ruregerero) rwekupinda munyika. chii kutambura kwakanyanya? . Uyu mubvunzo wakanaka kwazvo uye zvinosuruvarisa kuti hauna. mhinduro yakajeka . Kugamuchira ndine hurombo kune zvimwe zvirango zvinoshandiswa nemutemo wekupinda munyika (semuenzaniso, zvekusiya United States mushure mekushaya chinzvimbo chepamutemo kweanopfuura gore rimwe chete, zvakafanira kuratidza kutambura kwakanyanya kune mumwe mugari kana hama yemunyika anomukodzera kuti amuratidze ruregerero. Nekudaro, mutemo wekupinda munyika wega haupi tsananguro yezwi.
Kutama kunotarisa pa kutambura kunhengo yemhuri inogara kana mugari uyo anokodzera iye anenge achinyorera ratidza ruregerero , kwete zvinozoitika kumunhu anenge akumbira kana ruregerero rwaramba. Kutama kunofunga nezve kukanganiswa uko kurambwa kwekanganwiro kwaizove pahutano, hwepfungwa uye zvemari mamiriro kune anogara nhengo yemhuri kana mugari.
Iwe unogona kuwana iyo fomu yeiyo Immigration ruregerero pano. DZVANYA PANO.
Mune zvimwe zviitiko, chinhu chimwe chete chinogona kukwana kuratidza kutambura kwakanyanya; semuenzaniso, kana mugari kana mugari wehukama ane hurema uye zvinoenderana neanokumbira rubatsiro rwezuva nezuva. Mune zvimwe zviitiko, Kutama kunogona kutora huwandu hwemamiriro ezvinhu kuti uone kuti kune kutambura kwakanyanya.
Semuenzaniso Tsamba Dzokuregerera kukubatsira kunyora tsamba yako.
Ungatanga sei tsamba kubva ruregerero rwekupinda munyika. tsamba yekutambudzika kwakanyanya kubva kune anokumbira.
Matambudziko akakura kana akaomesesa matambudziko anogona kuzviratidza nekuzviratidza pachavo nenzira dzakasiyana muhupenyu hwemumwe wako, senge:
Kuva pasi pehunyanzvi hwekurapwa, nekuda kwezvikonzero zvepanyama kana mamiriro epfungwa; kuwanikwa uye mhando yekurapwa munyika yako; Kuziva kwenguva yekurapwa, sezvo ichi chiri chirwere chisingaperi kana chakanyanya (chakareba kana chipfupi).
Basa remangwana ramangwana; kurasikirwa nebasa kana kumiswa kwehunyanzvi tsika; kuderedza hupenyu hwehupenyu; kugona kudzosera kurasikirwa kwenguva pfupi; mutengo wezvinodiwa zvakakosha (dzidzo yakasarudzika kana kurapwa kwevana vanorwara); mutengo wekuchengetwa kwenhengo dzemhuri (vabereki vakwegura uye vanorwara).
Kurasikirwa nemukana wedzidzo yepamusoro, husina kunaka, kana sarudzo shoma dzekuchikoro; kukanganisa kwazvino chirongwa; zvinodiwa kuti ugamuchire dzidzo mune mumwe mutauro kana tsika nekurasikirwa nenguva uye giredhi; Kuwanikwa kwezvakakosha zvinodiwa, senge kudzidziswa kwedzidzo kana zvirongwa zvekuchinjana munzvimbo dzakasarudzika.
Vhara hama muUnited States uye / kana nyika yako; kuparadzaniswa nemukadzi / vana; mazera evana vevatori vechikamu; nguva yekugara mukati meUnited States uye zvisungo zviripo mukati medunhu.
Yakakosha kana Zvimwe Zvinhu
Tsika, mutauro, chitendero uye madzinza zvipingamupinyi, kutya kutambudzwa kunonzwisisika, kukuvara mumuviri kana netsaona; kubviswa kana kushorwa munharaunda; kuwanikwa kwenzvimbo dzemagariro kana edzimba; kana chero imwe mamiriro ezvinhu iwe aunofunga anogona kukubatsira iwe kusangana neakanangana nematambudziko akakomba kana kuomarara kuoma.
Izvo zvakakosha kuti iwe utsanangure zvakadzama kuti chii chingave, mune yako chaiyo nyaya, iro dambudziko rakanyanya kana kuoma kunoshanda kune ako mamiriro pasina kunetesa mutongi nenhauro dzisina kusimba.
Maitiro ekugadzira tsamba yekuregerera yevanopinda.
Rangarira kuti matambudziko makukutu kana kuoma kwakanyanya kunofanirwa kuve kwenhengo yemhuri inokodzera, kwete yako.
Kana semugari iwe uchikumbira ruregerero kune mumwe wako, kumwana wako ari pasi pemakore makumi maviri nemaviri ekuberekwa kana kuti vabereki vako vari pamusoro pemakore makumi maviri nerimwe ekuberekwa nekuda kwekutambura kwakanyanya, ndinokurudzira kuunganidza humbowo hunotevera:
Nemanzwiro: Iwe unofanirwa kuudza Officer kuti zvinokanganisa sei hupenyu hwako kuva kure nenhengo yemhuri yako.
Hutano: Iwe unotambura kubva kune chero chirwere chinokutadzisa iwe uye nekudaro iwe unoda rubatsiro rwemhuri yako yemhuri? Kana uine nhoroondo yako yezvokurapa, unogona kuiisa kuuchapupu.
Kufunga Kwemunhu: Kana hama yako ichibva kune imwe nyika isiri yako kana vari vanobva kunyika imwe chete yekwavanobva uye vachidzoka, zvingave zvakaoma mutsika kwauri, humbowo hwemakore awanga uchigara muUnited States, zvivakwa zvako, basa rako, udza ivo kuti iwe watove nehupenyu humwe hwakagara pano uye izvo zvinokanganisa zvakanyanya hupenyu hwako kazhinji.
Zvinhu zvakakosha: Humbowo hwekuti hwaizokanganisa sei hukama hwako newawakaroorana naye, hukama nevana vako, hukama hwemhuri nekuva nemunhu iyeye akakosha kure, kana nyika yakabva isina kuchengetedzeka, unganidza zvimedu zvepepanhau zvinoratidza mamiriro aya.
Zvehupfumi: Vaudze kuti zvinokanganisa sei hupenyu hwako hwemari, kuve nekuhaya mumwe munhu kuti aendese vana vako kuchikoro, kusava nerubatsiro rwemari rwemumwe wako kugadzirisa maakaundi, kana chokwadi chekupindura munhu iyeye kunze kwenyika etc.
Dzidzo: Kana pakati pezvirongwa zvako kwaive kudzidza uye ukatadza kuenderera nekuda kwechikamu chehupfumi, kana nekuti hauchisina nguva, uchifanira kutora nzvimbo dzemitezo yemhuri yako.
Chimwe nechimwe chezvidimbu zveuchapupu chinogona kusimbisa maitiro uye pamwe kuwana kuregererwa kunotenderwa.
Mienzaniso yetsamba dzakatenderwa dzekuregerera
Immigration uye Nationality Mutemo. USCIS , Sep 10, 2013, www.uscis.gov/legal-resource/migration-and-nationality-act .
Disiki : Ichi chinyorwa chine ruzivo. Haisi yezano repamutemo.
Muoni / mushandisi weiri peji rewebhu anofanira kushandisa ruzivo rwuri pamusoro chete segwara, uye anofanira kugara achibata kune zviri pamusoro kana vamiririri vehurumende yemushandisi neruzivo rwepamusoro-soro panguva iyoyo.
Husband Chikumbiro Zvinodiwa
Kubhadhara sei mari yekuenda kune dzimwe nyika?
Ndiani Anokodzera Kununurwa?